Induction Heat Treating Surface Process - ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ induction Heating ဆိုတာဘာလဲ။
မျက်နှာပြင်ဖြစ်စဉ်ကိုကုသသော induction heat ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
induction အပူ လျှပ်စစ်ကုသမှုဖြစ်စဉ်သည်လျှပ်ကူးသံလိုက်အားဖြင့်သတ္တုများကိုအထူးပစ်မှတ် ထား၍ အပူပေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ အပူသည်ထုတ်လုပ်ရန်ပစ္စည်းအတွင်းရှိလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်သတ္တုများသို့မဟုတ်အခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုပေါင်းစပ်ရန်၊ ခိုင်မာစေရန်သို့မဟုတ်ပျော့ပျောင်းစေရန်အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ခေတ်မီထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဤအပူကုသမှုပုံစံသည်အမြန်နှုန်း၊ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတို့ကိုအကျိုးရှိသောပေါင်းစပ်မှုပေးနိုင်သည်။ အခြေခံစည်းမျဉ်းများကိုလူသိများသော်လည်းအစိုင်အခဲပြည်နယ်နည်းပညာ၏ခေတ်မီတိုးတက်မှုများသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ကုသခြင်း၊ အပူပေးခြင်းနှင့်ပစ္စည်းများစမ်းသပ်ခြင်းတို့ပါဝင်သောအသုံးချရလွယ်ကူသော၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်အပူဖြင့်အပူပေးသောကွိုင်ကိုအလွန်အမင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းအားဖြင့် induction အပူဖြင့်ကုသခြင်းသည်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီအတွက်သာမကသတ္တုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီအတွက်အကောင်းဆုံးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။ Induction hardening သည် shock ဂျာနယ်များနှင့် shaft ကဏ္bearingများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည် shock load နှင့်တုန်ခါမှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သော ductility ကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သငျသညျပုံပျက်ပြproblemsနာများဖန်တီးစရာမလိုဘဲ intricate အစိတ်အပိုင်းများကိုအတွင်းပိုင်း bearing bearing မျက်နှာပြင်များနှင့်အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံခိုင်မာစေနိုင်သည် ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးမည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ရလွယ်ခြင်းတို့အတွက်တိကျသောareasရိယာများကိုခိုင်မာစေနိုင်သည်။
အာရုံစိုက်အပူကုသမှု မျက်နှာပြင်မာကြောခြင်းသည်အစိတ်အပိုင်း၏မြင့်မားသော wear area အားခိုင်မာနေစေစဉ်တွင်မူရင်းအမာခံသတ္တုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ မာကျောသောareaရိယာသည်အတိမ်အနက်၊ အကျယ်၊ တည်နေရာနှင့်မာကျောမှုတို့ကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ထားသည်။
တသမတ်တည်းကိုက်ညီမှု ပွင့်လင်းသောမီးလျှံ, မီးအားအပူပေးခြင်းနှင့်အခြားနည်းလမ်းများနှင့်ဆက်စပ်သောရှေ့နောက်မညီမှုများနှင့်အရည်အသွေးဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုဖယ်ရှားပါ။ စနစ်မှန်ကန်စွာချိန်ညှိခြင်းနှင့် set up ပြီးတာနဲ့အဘယ်သူမျှမခန့်မှန်းအလုပ်သို့မဟုတ်မူကွဲရှိ၏ အပူပုံစံပြန်လုပ်နှင့်တသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မီ solid state စနစ်များဖြင့်တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုသည်တူညီသောရလဒ်များကိုရရှိစေသည်။
အများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်မှု အစိတ်အပိုင်းအတွင်း၌အပူကိုတိုက်ရိုက် (၁၀၀ စက္ကန့်တွင်> ၂၀၀၀ အက်ဖ်) တွင်အပူနှင့်တိုက်ရိုက်ပေါက်သောကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ startup နီးပါးချက်ချင်းဖြစ်၏ အဘယ်သူမျှမနွေးသို့မဟုတ်သံသရာချအအေးမလိုအပ်ပါ။
တိုးတက်လာသောကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး အစိတ်အပိုင်းများသည်မီးလျှံ (သို့) အခြားအပူပေးပစ္စည်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမရှိ။ အပူလျှပ်စစ်စီးကြောင်းပြောင်းအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသူ့ဟာသူအတွင်းသွေးဆောင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ထုတ်ကုန် warpage၊ ပုံပျက်ခြင်းနှင့်ပယ်ချခြင်းနှုန်းသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချသည် တိုးမြှင့် utility ကိုငွေတောင်းခံလွှာငြီးငွေ့? ဤထူးခြားသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဖြစ်စဉ်သည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ ၉၀% ကိုစွမ်းအင်ကိုအသုံးဝင်သောအပူအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။ အသုတ်မီးဖိုများယေဘုယျအားဖြင့်သာ 90% စွမ်းအင်ထိရောက်ဖြစ်ကြသည်။ နွေးထွေးသောသို့မဟုတ်အေးမြသောသံသရာများမလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် stand-by အပူဆုံးရှုံးမှုကိုအနည်းဆုံးလျှော့ချနိုင်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ရိုးရာကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းသည်မလိုအပ်ဘဲသန့်ရှင်း။ ညစ်ညမ်းမှုမရှိသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ရန်ကူညီသည်။
induction အပူ ၎င်းသည် Induction Coil (Inductor) မှထုတ်လုပ်သော Alternative Magnetic Field မှစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူသောကိုယ်ခန္ဓာ၏အကာအကွယ်မဲ့အပူနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိလျှပ်စစ်ပစ္စည်းခုခံမှုကြောင့်အပူဖြစ်ပေါ်စေသောခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအနီးကပ်ကွင်းဆက် (အက်ဒီ) ရေစီးကြောင်းများမျိုးဆက်များ
ပြင်ပသံလိုက်စက်ကွင်း၏ orientation ကိုအောက်ပါလှည့်သောသံလိုက် micro volumes ကို (domains များ) ၏ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် hysteresis အပူ (တစ်ခုတည်းသောသံလိုက်ပစ္စည်းများအတွက်!) ကြောင့်
induction အပူ power supply လက်ရှိ (I1) induction coil သို့ပို့လွှတ်သည်
ကွိုင်ရေစီးကြောင်းများ (အမ်ပီယာအလှည့်) သည်သံလိုက်စက်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကွင်းပြင်လိုင်းများသည်အမြဲတမ်းပိတ်ဆို့ထားခြင်း (သဘာဝနိယာမ!) နှင့်လိုင်းတစ်ခုချင်းစီသည်လက်ရှိအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကွိုင်အလှည့်နှင့် workpiece ပတ်ပတ်လည်တွင်ရှိသည်
အပိုင်း Cross-section (ထိုအစိတ်အပိုင်းနှင့်တွဲဖက်) မှတဆင့်စီးဆင်းသံလိုက်စက်ကွင်းပြောင်းလဲအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဗို့အားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
Induced voltage သည် coil current ရှိသည့်နေရာနှင့်ဆန့်ကျင်သောနေရာတွင်စီးဆင်းနေသောအစိတ်အပိုင်းတွင် eddy currents (I2) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
Eddy ရေစီးကြောင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်အပူ generate
induction အပူတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ပါဝါ Flow
ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင် current ပြောင်းလဲခြင်းသည်လမ်းကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်ပြောင်းသည်။ အကယ်၍ ကြိမ်နှုန်းသည် 1kHz ဖြစ်လျှင်၊ စက္ကန့်အတွင်းအကြိမ် ၂၀၀၀ လမ်းကြောင်းပြောင်းသည်။
current နှင့် voltage ၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် power supply နှင့် coil အကြားလှည့်ပတ်နေသော instantaneous power (p = ixu) ၏တန်ဖိုးကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုစုပ်ယူနေသည် (Active Power) နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်ကွိုင်၏ (Reactive Power) ကိုထင်ဟပ်နေသည်။ Capacitor ဘက်ထရီကိုဓာတ်အားဖြည့်စွမ်းအင်မှထုတ်ယူအသုံးပြုသည်။ Capacitors သည်ကွိုင်မှဓာတ်ပြုသည့်စွမ်းအားကိုရရှိပြီး၎င်းသည်လှိုကိုထောက်ပံ့သောကွိုင်ဆီသို့ပြန်ပို့သည်။
“ coil-transformer-capacitors” ဆားကစ်ကို Resonant or Tank Circuit ဟုခေါ်သည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ, နည်းပညာများ Tags: အပူကုသ, အပူ induction ကုသ, အပူကုသဝန်ဆောင်မှု, အပူကုသမှု, အပူကုသမှု, HF အပူကုသ, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းအပူကုသ, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းအပူကုသမှု, သော induction အပူကုသ, ဖြစ်စဉ်ကိုအပူကုသခြင်း, မျက်နှာပြင်အပူကုသ, မျက်နှာပြင်အပူကုသမှု post navigation